Afisy NASA telo ho anao manonofinofy ho mpizahatany amin'ny habakabaka | Famoronana an-tserasera
Tsy ampy herintaona lasa izay, SpaceX, ilay orinasan-tseranan'i Elon Musk (Tesla CEO), dia nanosika antsika haka sary an-tsaina ahoana ny fomba fitsangantsanganana an-habakabaka any mars miaraka amina andian-dahatsoratra fanoharana avo lenta ary ny fampiasana loko tasy.
Ankehitriny dia ny NASA no te-hanangana sy hanao doka fanaovana dokambarotra "Amidio" ny fizahan-tany amin'ny ho avy handeha any amin'ny planeta izay efa misy maro izay mametraka ny tanjona amin'ny fahatongavan'ny olombelona, ​​Mars.
Ireto afisy ireto dia a sary misy famaranana lehibe Ary afaka mandray tsara amin'ny rindrin'ny efitranonao ianao haka sary an-tsaina ny mpizahatany ho avy izay hitsidika ireo fotoana maina ireo izay nahitana vao haingana fa misy ny fiainana.
NASA dia nanendry mpamorona maro ary Sary fanoharana tsy hita maso mamorona andiana afisy miaraka amina karazana endriny rehetra. Ny tsara indrindra, na dia natao ho an'ny mpiasa sy ny mpikambana ao amin'ny governemanta aza izy ireo tamin'ny voalohany, dia azo vidiana amin'ny $ 40 isanisany.
Ny marina dia ny kalitaon'ny tsirairay sy izay manentana azy dia manome aingam-panahy, ary maro hafa raha nahita ny sarimihetsika The Martian. Amin'izao fotoana izao dia misy peta-drindrina telo, fa ny tsirairay amin'izy ireo dia tena manintona ny saina amin'ireo izay nandalo ny eritreriny fa handeha hitsangatsangana any amin'ny planeta Mars.
Ireto afisy azonao vidiana avy amin'ny tranokalan'ny mpamorona na mitovy fampidinana ny sary amin'ny famaritana avo hametraka azy ho toy ny temotra. Ireo sary telo ireo dia ny volana Saturnus Enceladus, iray hafa avy amin'ny iraka Voyager izay namakivaky ny faritra amin'ny rafi-masoandro, ary ny iray farany tany Mars.
Una fandraisana andraikitra mahafinaritra nataon'i NASA fa mandritra ny fotoana itokananay azy io haka sary an-tsaina ny fizahan-tany amin'ny habakabaka mba hahafahan'ny taranantsika, amin'ny fotoana iray, ho tena mpandray anjara amin'ny eritreritsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » NASA dia te hamporisika anao hanao fizahan-tany amin'ny habakabaka amin'ireto afisy telo ireto
Famolavolana fitaovana: Jery amin'ny famolavolana tranonkala ankehitriny